Oggolaanshaha daganaanshaha joogada ah ee magangalya doonka ah - Migrationsverket
/ Oggolaanshaha daganaanshaha joogada ah ee magangalya doonka ah
Permanent uppehållstillstånd för asylsökande – somaliska
Haddii lagu siiyo ruqsada daganaanshaha waxaad xaq uleedahay in aad ku noolaatid oo aad ka shaqeysid Sweden insla xiliga sida qof walba ee dagan halkaan.
Oggolaanshahaaga daganaanshaha joogtada ah way shaqeyneysaa haddiiba aad ku nooshahay Sweden. Waxaad heleysaa kaarka oggolaanshaha daganaanshaha sida caddeynta in aad leedahay oggolaanshaha dagaashaha. Kaarka ma aha waraaq aqoonsi ama waraaqda safarka. Waxaad ugu safri kartaa gelitaan iyo ka soo baxid wadanka, laakiin haddii aad ku nooshahay Sweden waa in leedahay baasaboor shaqeynaya iyo kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha si markaas dib loogu galo wadanka. Waa in sidoo kale aad keydisaa wargelintaada go'aanka si laguu siiyo oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah. Waxaad ka heleysaa waxtar badan tan haddii aad u baahantahay in aad la xiriirtid wakaaladaha dowladdaa.
Uma baahnid in aad codsatid kordhinta oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah laakiin kaarka oggolaanshaha deganaanshaha waxaa kaliya oo uu shaqeynayaa ilaa shan sanno. Si aad u heshid kaarka oggolaanshaha daganaanshaha cusub waa in aad booqataa Wakaalada Socdaalka si loo sawiro iyo si looqaado farahaaga markale.
Marka aad heshid oggolaanshaha deganaanshaha joogtada ah waa in aad iska diiwaangelisaa diiwaanka bulshada ee Wakaalada Canshuurta Swedish (Skatteverket) sida ugu dhaqsaha badan oo suurtogalka ah. Diiwaangelinta bulshada ayaa loo baahanyahay ka hor inta aadan soo xaadirin Afka Swedish ee Socdaalada (sfi) iyo xaq u lahaatid faa'idooyinka nidaamka amniga bulshadda Swedish. Markii aad iska diiwaangelisid diiwaanka bulshadda waxaad sidoo kale heli kartaa warqada aqoonsiga Swedish kaas oo aad u baahaneysid, tusaale ahaan, haddii aad rabtid in aad furatid akoon bangi.
Si aad isaga diiwaangelisid diiwaanka bulshadda waa in aad aadaa Wakaalada Canshuurta Swedish taas oo qoreyso halka aad ku nooshahay, heerkaaga guurka (haddii aad guursatay ama aadan guursan), muwaadinnimadaada iyo goobtaada dhalashada. Marka aad aadid Wakaalada Canshuurta Swedish waa in aad qaadataa kaarkaaga daganaanshaha joogtada ah sidoo kale waraaqaaha aqoonsiga oo shaqeynayo. Haddii waraaqaha aqoonsigaaga ay hayso Wakaalada Socdaalka Swedish waxaad weydiin kartaa koobigeeda. Koobiga waa in uu saxiixaa qofka caddeeyo in koobiga uu la mid yahay sida orijinaalka. Qofkan waa in sidoo kale qoraa magacooda oo xaraf weyn oo sheegaa lambarka taleefonkooda.
Macluumaadka Wakaalada Canshuurta Swedish ee diiwaangelinta bulshada (oo af ingiriis)
Macaluumaad ku saabsan kaalmada dib u dejinta waxa laga heleyaa bogga internetka ee Xafiiska shaqada
Ka akhriso macluumaad ku saabsan kaalmada dhaqaale ee dadka waaweyn ee ay bixiso Hey’adda hawlgabku (luqadda iswiidhishka)
Haddii lagu siiyay oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah qoyskaaga wuxuu codsan karaa ruqsadaha joogtada ah si markaas ay ugu soo biiraan Sweden.
Waxaa lagugu soo rogoyaa waxa loo yaqaan joogteynta sharuuda. Tani waxay la micnatahay waa in ay kuu suurtogashaa in aad taageertid labbadaba adiga iyo qoyskaaga. Waa in sidoo kale aad lahaataa guri si balaaran kuugu filan oo heer ku haboon ah noloshaada iyo si wadajir ah goortii qoyskaaga u soo guuro Sweden.
Ruqsadaada daganaanshaha joogtada ah waalaga laaban karaa haddii aad ka tagtid Sweden. Haddii aad ogeysiisid Wakaalada Socdaalka Swedish in aad rabtid in aad haysatid oggolaanshaha deganaanshahaaga joogta ah, waxaad joogi kartaa dibada illaa labo sanno iyada oo aysan saameynin oggolanshahaaga.
Haddii aadan ku laaban Sweden labbo sanno kadib wakaalada socdaalka way ka laaban kartaa ogolaanshahaaga degenaanshaha. Oggolaanshaha deganaanshaha sidoo kale waa laga laaban karaa haddii aad sheegtid aqoonsi been ah marka aad codsaneysid oggolaanshaha daganaanshaha, ama haddii adigoo og been sheegtay ama aad ku guuldareysatay in aad sheegtid wax aad ugu muhiimsanaa oggolaanshaha daganaanshahaaga. Haddii laguugu xukumo dambi, maxkamada waxay go'aansan kartaa in lagu celiyo. Wakaalada Socdaalka ayaa kadib ka laaban karta oggolaanshaha daganaanshaha. Oggolaanshahaa daganaanshaha waa laga laaban karaa xitaa haddii aad laheyd oggolaanshe dhoor sanno.
Wargelinta aad rabtid in aad haysatid oggo­laans­haha daga­naans­ha­haaga joog­tada ah
Si aad u sheegtid in aad jaceshahay in aad haysatid oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah marka aad isticmaaleysid muddo dheer oo wadan kale waa in aad buuxisaa foomka Anmälan om att få behålla joogta ah uppehållstillstånd (Wargelinta rabitaanka lagu haysanayo oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah), lambarka 186011. Ku soo dir foomka migrationsverket@migrationsverket.se ama
Wargelintaada wa in ay timaadaa Wakaalada Socdaalka Swedish ee aan ka dambeynin hal todobaad ka hor inta aadan ka tagin Sweden. Haddii safarkaaga la joojiyo waa in aad soo ogeysiisaa Wakaalada Socdaalka Swedish ee midan oo aan ka dambeynin maalinta aad ugu talo gashay in aad safartid.
Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, foomka lambarka 186011 (oo af iswiidhish)
Notification of desire to retain permanent residence permit, foomka lambarka 187011 (oo af ingiriis)
Soo codso baasa­boorka dadka ajna­biga
Soo codso baasa­boorka safarka